ỤLỌ OMEBE IWU, SINETI AGWALA NDI UWE OJII NA NDI AMỊ KA HA PỤỌ N’ỤZỌ… – hoo!haa!!
ỤLỌ OMEBE IWU, SINETI AGWALA NDI UWE OJII NA NDI AMỊ KA HA PỤỌ N’ỤZỌ…
Na igosi mwute ha gbasara ka ndi uwe ojii nakwa ndi agha si akpụchi ụzọ ụgbọ-ala dịgasị na mpaghara ọdịda-ọwụwa anya anwụ ala anyị, ụlọ omebe iwu sineti ala anyị agwala gọmenti etiti ka o wezụga ndi uwe ojii na ndi agha n’ụzụ dịgasị na mpaghara ahụ.
N’okwu ha, ime nke a ga-eme ka ibugharị ndi njem, ibugharị ngwongwo nakwa iga ozi na-aga awara awara na mpaghara ahụ nakwa ala anyị niile gbaa gburugburu.
Yabụ ụlọ omebe iwu a, ezipula ndi kọmitii na-ahụ maka ndi uwe ojii na ndi agha, ka ha ga njem nleta na mpaghara ahụ iji mara ka eke si anya anwụ ma wechighatara ha ozi gbasara ihe ha hụrụ maka nke a.
Ụlọ omebe iwu a gwara ndi agha nakwa ndi uwe ojii ka ha na-asa anya na miri ime ka nchekwa obodo ghara iri mperi n’ụzọ ọbụla n’ala anyị, ọkachakwa ebe enwebeghị mkpesa na ndi ọlụọ ọlaa na-atụ udo aka n’ihu.
Ọbụ onye omebe iwu bụ Mao Ohuabụnwa nke otu ndọrọ-ndọrọ ọchịchị PDP, sitere mgbago ugwu Abia, malitere okwu a site na okwu ọ gwara ndi omebe iwu sineti iji kọwara ha maka ntarama ahụhụ ndi mpaghara ọdịda-ọwụwa anya anwụ na-ata gbasara ime njem n’ihi mkpụchi ụzọ ndi uwe ojii na ndi agha.
Ohuabụnwa kwuputara mkpa ọ dị bụ gọọmenti ala anyị ime ka ime njem nakwa ibugharị ngwongwo n’akụkụ ala anyị niile na-aga sịrịrị werere, na-egbochịgh ndi nchekwa dị n’aka ịrụ ọrụ ha.
Ohuabụnwa rụtụrụ aka, na-agbanyeghị na enweghị ọgbaghara na mpaghara ọdịda ọwụwa anya anwụ a, na etu ndi uwe ojii na ndi amị dị n’ụdị ndi gaje ihu ọgụ si akpụchi ụzọ n’ebe ahụ na-agbagwoju anya. Ọ rụtụrụ aka n’ebe ụdị mkpụchi ụzọ a na-aka njọ bụ okporo ụzọ awara awara si Enugwu gawa Aba na Patakọtị nakwa nke si Enugwu gawa Ọnịcha. Ọ sịrị na-enwere ebe mkpụchi ụzọ karịrị iri ise n’ụzọ ndi a. O kwukwara na ha dịdebechara onwe ha. Ma kwue na ọbụ ndi uwe ojii na ndi agha bu ngwa-agha dị egwu nọ na nche n’ebe ndi a.
Ọ sịrị na idebe ebe nkpụchi ụzọ n’ụdị dịdebere onwe ha n’ebe enweghi ọgbaghara na-ebutere gọọmenti imebi ego, ime ka nchekwa ghara ịdị nhata-nha, ma biakwa mee ka ụkwụ na-akpọ njem ụmụ mmadụ tinyekwara ịkwado ime mpụ na iri ngarị nke okporo ụzọ.
Na mkpokọta okwu ya, ihe ndi a na-emetụta akụ n’ụba ndi ọdịda-ọwụwa anya anwụ nakwa nke ala anyị niile gbaa gburugburu.
Previous Post: OKE IHE MBEREDE ỤGBỌALA ATAALA ISI MMADỤ N’ENUGWU
Next Post: NDI ISI ỌCHỊCHỊ ETINYEWELA OKWU ỌNỤ MAKA UDO N’EBỌNYỊ NAKWA KRỌS RIVA